Ụbọchị: 9 October 2019
1. PAST PALvilla nke PASTAVILLA, dika a na-eche na ọ bụ akara ngosi nke PọtTA nke ndị Turkey. Ntọala na 1928. N'oge ahụ, a kpọrọ ya Pastavilla na 1992 mgbe akpọrọ Kartal Pasta, ọ bịakwawo taa. 2. Ülọ TÜRKÇE Iji Turgut Aydın Holding [More ...]
ANYA OIL: Yıldız Holding ererela Ajinomoto Japanese na akara anyị na 2016. COLA TURKA: 2015 resịrị tolker nye Japanese Dydo DRINCO. MILK: Ndị French Group Lactalis rinụrụ. SANA OIL: [More ...]
Metro Istanbul achọpụtala ihe nrụpụta maka ụlọ nke na-enye ike nke metro na tramways. N'ihi ya, ọtụtụ nde euro ga-anọgide na oke nke obodo. Istanbul Metropolitan Municipality enyemaka ụlọ ọrụ nke Metro Istanbul, Istanbul dị mkpa ma Turkey aku na uba [More ...]
General Directorate of State ọdụ ụgbọ elu State (DHMI), 2019 afọ nke ụgbọ elu ụgbọelu, ndị njem na ọnụ ọgụgụ njikwa. N'ihi ya, na Septemba; ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu na-apụ ma na-apụ n'ọdụ ụgbọ elu, 77.365 n'ime ụlọ [More ...]
Standlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ Turkish Standards Institute (TSE) Kayseri Regional Coordinatorship nke ụlọ ọrụ njikwa njikwa dị mma arụpụtara. Na nzukọ nyocha a na-eme mgbe nyochachara ego ahụ, ekwuputara na ụlọ ọrụ anyị gosipụtara njikwa na-aga nke ọma na mpaghara nke ịdị mma, gburugburu ebe obibi, ike, ahụike na nchekwa. TSE [More ...]
Sivas Demirspor Club 2019-2020 mepere oge. Sivas Demirspor Club oge mmemme mmeghe T openingdemsaş Onye njikwa na onye isi oche nke Sivas Demirspor Club Mehmet Basoglu, Demiryol-Is Union Sivas Alaka Secretary General Financial Kemal Ọkachamara, Sivas Demirspor Club management [More ...]
Obodo Malatya mepere emepe na-arụ na mgbanwe, mgbanwe na nrụzigharị na-arụ ọrụ na Golden Apricot Boulevard, nke bụ nnukwu boulevard na Malatya, nke na-ejikọ Tecde na njikọ Maşti. Oge anumanu nke 3.3, akuku nke etiti 50 nke Golden Apric [More ...]
Onye isi obodo nke Gaziantep Fatma Sahin, Belkis District nke Sehitkamil gara leta ndị agbata obi. Sahin, iji dozie nsogbu nke nkwụsị ụgbọ ala na-ezughi ezu na ndị otu agbata obi, Belkis rịọrọ ka ịmalite mbido iji gbalite bọs bọs na agbata obi. na-elekọta mmadụ [More ...]
Mbido Obodo maka Mgbakọ ụgbọelu na Istanbul. IMM, nke ga-egwuri on Friday mgbede na Turkey - Albania mba egwuregwu bụ n'ihi oge inyịme awa ụfọdụ ụzọ ụgbọ oloko e. Ofufe n'ọdụ ụgbọ elu nke Metro Istanbul na-arụ, nke enyemaka nke Mpaghara Obodo Metropolitan (IMM), 11 [More ...]
Abali ken ka anyị na-agagharị na weebụsaịtị TCDD, anyị hụrụ onwe anyị na ibe mmemme Investment 2019. Ọzọkwa, ọ tụrụ anyị n'anya ịhụ ozi dị na peeji ahụ. Ihe anyị hụrụ bụ nke a: TCDD General Directorate 1 N’ọnwa Ọgọstụ 2019 mere ntụgharị nke ise na mmemme itinye ego. [More ...]
Onye isi oche nke CHP Bursa, Onye otu omebe iwu nke Kọmitii Nke otu Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mịnịsta na-ahụ maka njem na akụrụngwa Mehmet Cahit Turhan jụrụ mgbe a ga-arụcha Mkpoko Bursa Ankara High Speed. Ndabere nke Bursa-Ankara High Speed ​​Train Project 23 December [More ...]
A ga-arụ ọrụ okporo ụzọ roba na ọkwa nke ụzọ ụgbọ elu ga-eme ụdị akụkọ ụgbọ oloko a na ozi ndị ọzọ nwere ike ịmasị gị.RayHaber 25.01.2019 Tender Bulletin 25 / 01 / 2019 Enweghị ndekọ ndekọ dị nro maka 25.01.2019 na sistemụ anyị.RayHaber 04.02.2019 Tender Bulletin 04 / 02 / 2019 Na sistemụ 04.02.2019 anyị [More ...]
Onye isi ala MESİAD Hasan Engin kwusiri ike na Mersin enweghị oge ida iji dozie nsogbu ụgbọ njem, nke bụ otu n'ime nsogbu kachasị na obodo anyị. Metro [More ...]
Fgbọ elu ụgbọ elu abawanye na Istanbul. Site na nkwupụta sitere na Metro Istanbul, M6 Levent-Boğaziçi University / Hisarüstü metro line emewo ka ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu dị elu. Edere nkwupụta a na nkwupụta edere: Levent M6 Levent-Boğaziçi University / Hisarüstü akara usoro a na-eme oge nkeji 9 niile. [More ...]
Taa na History 9 October A nyere Mr. Alfred Kaulla ikike maka 1890 Thessaloniki-Monastery Line, na-emechitere otu òtù German nke jikọtara na Bank Bank. E nyere ya Feriz America n'oge gara aga. 9 October 1918 Toros na Amanos tunnels na-agwụcha. na-ewu [More ...]